Somali Ganacsato Ah oo Lagu Weeraray Dalka Koonfur Afrik - Wargane News
Home Somali News Somali Ganacsato Ah oo Lagu Weeraray Dalka Koonfur Afrik
Kooxo burcad Koofur African ah ah ayaa lagu soo warramayaa in ay weerar ku qaadeen labo nin Ganacsato somaaliyed ah ah,kuwaasoo ku sugnaa afaafka hore dukaan ay ku lahaayen magaalad cab town ee dalka Koofur Africa.
Waxaana la sheegay in halkaasi ay ku dileen gacasade somaaliuyed mid kalena ay ku dhaawcen burcadaasi, Dilka ayaa wax uu ka dhacey xaafadda khaliija ee magalada cab town iyadoona ninka la diley lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Maxamuud Maxamed halka ninka la dhaawaceyna lgu magacaaboMaxamed Ismaaciil Cali.
Dilkan ayaa wax uu qeeb ka yahay dilal muwadininta Soomaaliyeed waayadii dambe loogu geesaneyay dalka koofur Africa.
Waxaana marba marka ka dambeesa isisoo tarayay kooxaha Burcadda Koofur African-ka ee dhibaatada isugu jirta dilka iyo dhaawaca u geysta Soomaalida ku ganacsata wadankaasi, Mana jirto ila iyo hada cid isku howshay in ey wax u qabato muwaadiniinta somaaliyed ee sida micna darada ah loogu dilo dalka Koofur Africa.
Waxaana xusid mudan in dalalka kale dadkooda looga baqo dowladohoda oo si weyn uga dhiidhiya iyagoo ka diga in waxyeelo loo geesto muwadiniintoda.